Admin – Garsoore Sports
Kooxda Kubada Cagta Cologne Ee Dheesha Bundesliga Jarmalka ayaa waxay maanta baajisey Qorshe ay Tababar ku qaadan lahaayeen Ciyaartoydeeda. Fc Cologne ayaa la sheegay in Shaqaalaheeda Qaar laga helay Caabuqa Covid19 sidaa awgeedna ay noqotay in Tababarkii…
Difaacii Hore Ee Kooxda Shayaadiinta Cas Rio Ferdinand ayaa codkiisa ku biiriyey in naadiga ay Keensadaan weeraryahanka cajiibka ah Erling Haaland. Gool ma waayaha Dalka Norwey Erling Haaland ayaa soo jiitay qaab ciyaareedkiisa Wacan Kooxo…
Difaaca Chelsea Antonio Rudiger ayaa waxa uu ka hadlay Dalabyo uga yimid qaar ka mid ah Kooxaha Caanka ah ee Qaarada Yurub. Rudiger ayaa sheegay in xitaa ay lasoo xiriireen Jose Mourinho iyo Maamulka Kooxda Reer Faransiiska…
39 Sano jirka Zlatan Ibrahimovich ayaa Dib ugu soo laabtay Xulka Qaranka Sweden uu dib uga soo muuqan doono Kulamada ay ciyaarayaan. Ilaa 2016-kii ayaa Ibrahimovich waxa uu ku dhawaaqay iskaga fadhiisiga ciyaaraha Caalamiga ah.…
Laacibka Matteo Guendouzi ayaa waxa la war geliyey inuu udagaal galo Booskiisa maadaama ay ciyaartoy ku boos ah naadiga kusugan yihiin. Timo weynahaan Khadka dhexe kabiir ku noqday ayaa aqbalay in uu ka tallaabo dheereeyo…